Dabagal ku saabsan halka uu ku dambeeyey kiiskii Ikraan Tahliil (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Wararka Dabagal ku saabsan halka uu ku dambeeyey kiiskii Ikraan Tahliil (Dhegeyso)
Dabagal ku saabsan halka uu ku dambeeyey kiiskii Ikraan Tahliil (Dhegeyso)
(Hadalsame) 02 Nof 2021 – Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa 21-kii bishii tagtay heshiis ka gaaray khilaaf muddo u dhaxeeyay.
Khilaafkaas ayaa ka dhashay sida loo wajahayo baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsaneyd hay’adda sirdoonka ee NISA oo la la’yahay, oo ay haya’ddu sheegtay inay dileen Al-Shabaab, taasi Al-Shabaab ay iska fogeysay.
Waxaa qodobada heshiiska ka mid ah in hay’adaha caddaaladda loo madax baneeyo inay baaraan kiiskan.
Haddaba xagee ku dambeeyaa baaritaanka kiiskan? Waa qodobka aan ku eegeyno barnaamijka Galka Baarista, waxaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Previous article”Somalia ayuu xisbi ka furtay!” – Sababta loo xirey dugsiga Muslimiinta ee Römosseskolan oo wax laga qoray (Siyaasi lagu dheggan yahay)
Next articleDowladda Sweden oo keeni karta sharci ogolaanaya in qofka gurigiisa la jebin karo si loo baaro telkiisana la dhegeysan karo (Dhegeyso)